Yintoni i-Omni-Channel? Ichaphazela njani ukuThengisa ngeli xesha leholide? | Martech Zone
Yintoni i-Omni-Channel? Ichaphazela njani ukuThengisa ngeli xesha leholide?
Lwesine, Disemba 17, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Iminyaka emithandathu eyadlulayo, owona mceli mngeni mkhulu kwintengiso ekwi-Intanethi yayikukudibanisa, ukulungelelanisa, kunye nokulawula umyalezo kwisitishi ngasinye. Njengoko iindlela ezintsha zavela kwaye zanda ekuthandeni, abathengisi bongeze iibhetshi ezininzi kunye nokuqhushumba ngakumbi kwishedyuli yabo yemveliso. Isiphumo (esasele siqhelekile), yayiyimfumba enkulu yezentengiso kunye nemiyalezo yokuthengisa eyayihlisa wonke umqala wethemba. Ukubuyela umva kuyaqhubeka -kukucaphukisa abathengi ukungabhalisi kunye nokufihla kwiinkampani ababekhe bonwaba ngakumbi kuzo.
Ngelishwa, imvelaphi yekota Omni Kuthetha konke… kwaye yindlela abathengisi bahlala bewaphatha ngayo amajelo. Ndinqwenela ukuba ngesibe sibhale ixesha elingcono, njengokuthengisa okanye ukuthengisa amajelo aqhubela phambili. Ukuzenzekelayo kuwo onke amajelo kuhlala kuphatha okunye kolu nxibelelaniso, kodwa amaxesha amaninzi asilwenzi ngcono olo nxibelelwano.
I-Omnichannel, ekwabizwa ngokuba yi-omni-channel, ibhekisa kumava onke ahambelana nomthengi onikiweyo. Ngaphakathi kwintengiso, i-omni-yejelo libhekisa kumava amanyanisiweyo entengiso kwii-mediums (aka channels). Endaweni yokuba umthengi ahlaselwe ziimediyam, amava ayabhalwa kwaye alungelelaniswe apho kulindeleke khona ukukhutshwa ngesandla. Ke intengiso kamabonwakude inokuqhuba abantu kwi-URL kwindawo apho umthengi anokuzibandakanya khona ngesihloko, okanye mhlawumbi ubhalisele izilumkiso zeselfowuni okanye ii-imeyile eziqhubela phambili ukubandakanyeka. Amava kufuneka angabinamthungo kwaye aqhubeke, endaweni yokuphindaphinda kunye nokucaphukisa.
Amava e-Omnichannel yokuthengisa okanye amava okuthenga abhekisa kunxibelelwano lokwenyani phakathi kwevenkile kunye nezixhobo zedijithali, ulwazi lomthengi ekwabelwana ngalo phakathi kokuziphatha kwe-Intanethi kunye nokunxibelelana kunye nomthengisi wasekhaya, kunye-namaxabiso, ukuhanjiswa, kunye nokuchaneka kwesitokhwe phakathi kwevenkile kunye nendawo yedijithali. Xa yonke into isebenza ngaphandle komthungo, ikhokelela kumava okuthenga amakhulu. Oko kukhokelela kwintengiso enkulu kunye nokuqhubeka nokuthengisa kwikamva ngomthengi ngamnye. Ngapha koko, abathengi be-omnichannel bane Ama-30% exabiso eliphezulu lokuphila kunabo bathenga besebenzisa ijelo elinye kuphela.
Njengokuba abathengi besiba ngamajelo e-agnostic ngakumbi, kunye ne-omnichannel ngakumbi kuhambo lwabo lwabathengi, abathengisi abatyhobozayo kwaye bahlangabezana neemfuno zabo bayayibona eyona mbuyekezo inkulu ngeli xesha lokuthenga ngeholide. Ayisekho malunga nezitena nodaka ngokuchasene ne-e-yorhwebo. Abathengisi banamhlanje abaphumeleleyo bayazi ukuba kufuneka benze uhambo lomthengi ngamava angenamthungo kuwo onke amajelo kunye nazo zonke izixhobo ukuze abathengi bazive benganyanzelekanga ukuba bakhethe. UStuart Lazarus, VP wentengiso kuMntla Melika, uMqondiso
Le infographic igcwele ukugcwala kwezibalo zomntu wokuqala kunye nowesithathu kulokho abathengi be-omnichannel abalindeleyo kunye nendlela amajelo edijithali anefuthe ekuthengweni kwevenkile. Ibandakanya izibalo ezivela kwiimpawu ezinje ngeAmazon, uMichael Kors, kunye noWarby Parker ukubonisa indlela abaziqinisa ngayo ngokuchasene nokhuphiswano, kwaye baphonononge imiceli mngeni ephambili abathengisi abajongana nayo namhlanje. Amagqabantshintshi:
I-64% yabathengi abakwi-Intanethi bacacisa isantya sokuhambisa njengezigqibo ezibalulekileyo zokuthenga
I-90% yabathengi bevenkile ezivenkileni bayindwendwele iwebhusayithi kwaye baya kwenza ukuthenga okwesibini okanye okwesithathu kwi-intanethi
Kuphela yi-36% yabathengi abanokutyelela ivenkile ukuba akukho lwazi lwempahla lwalufumaneka kwi-Intanethi
tags: 2015Amazonukuthenga okungconoULWESIHLANU omnyamaKrisimesiidatha yomthengidelivdeloitteilokhwe yamehloiholideidepho yasekhayaukudityaniswamacy'smichael korsmzantsiwebumjelo-omniomnichannelukuthengisa amajelo omnichannelshopn omnichannelIvenkileuphawuwalmartumgcini weparby
Iindlela ezi-5 zoLawulo lweeNkqubo eziSekwe kwiLifu zikunceda ukuba usondele kubathengi bakho
Amaqhinga ama-4 okuGuqula abaTyeleli abatsha abaBuyileyo